1 Ndị Kọrịnt 2 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
1 Ndị Kọrịnt 2:1-16
2 Ya mere, mgbe m bịakwutere unu, ụmụnna m, ejighị m oké okwu+ ma ọ bụ oké amamihe bịa na-ezisara unu ihe nzuzo dị nsọ+ banyere Chineke. 2 N’ihi na m kpebiri na m gaghị ama ihe ọ bụla n’etiti unu ma e wezụga Jizọs Kraịst,+ bụ́ onye a kpọgidere n’osisi. 3 M bịakwutekwara unu n’adịghị ike na n’egwu na n’oké ịma jijiji;+ 4 ejighị m okwu ire ụtọ nke amamihe gwa unu okwu ma ọ bụ kwusaara unu ozi ọma, kama e ji m ngosipụta nke mmụọ nsọ na ike,+ 5 ka okwukwe unu wee dabere, ọ bụghị n’amamihe ụmụ mmadụ,+ kama n’ike Chineke.+ 6 Anyị na-ekwupụta amamihe n’etiti ndị tozuru okè,+ ma ọ bụghị amamihe+ nke usoro ihe a, ma ọ̀ bụ nke ndị na-achị usoro ihe a,+ bụ́ ndị na-agaghị adịkwa.+ 7 Kama anyị na-ekwupụta amamihe Chineke dị n’ihe nzuzo dị nsọ,+ bụ́ amamihe zoro ezo, nke Chineke kara aka tupu oge eruo, tupu usoro ihe ndị a,+ maka ebube anyị. 8 Ọ dịghị otu n’ime ndị na-achị+ usoro ihe a maara+ amamihe a, n’ihi na ọ bụrụ na ha maara ya, ha agaraghị akpọgide+ Onyenwe anyị dị ebube n’osisi. 9 Ma dị nnọọ ka e dere, sị: “Anya ahụbeghị, ntị anụbeghịkwa, obi mmadụ echebeghịkwa ihe Chineke kwadebeere ndị hụrụ ya n’anya.”+ 10 N’ihi na ọ bụ anyị ka Chineke kpugheere+ ha site na mmụọ ya,+ n’ihi na mmụọ+ ahụ na-enyocha ihe niile, ọbụna ihe ndị miri emi+ nke Chineke. 11 N’ihi na ònye n’etiti ụmụ mmadụ maara ihe dị n’ime mmadụ ma e wezụga mmụọ+ mmadụ nke dị n’ime ya? Otú ahụkwa, ọ dịghị onye maara ihe ndị metụtara Chineke, ma e wezụga mmụọ+ nke Chineke. 12 Ma anyị natara, ọ bụghị mmụọ+ nke ụwa, kama mmụọ+ nke si na Chineke, ka anyị wee mara ihe niile Chineke ji obiọma nye anyị.+ 13 Ihe ndị a ka anyị na-ekwukwa, anyị ejighị okwu e ji amamihe mmadụ+ kụzie na-ekwu ya, kama anyị ji okwu e ji mmụọ nsọ+ kụzie na-ekwu ya, na-ejikọta ihe ime mmụọ na okwu ime mmụọ.+ 14 Ma onye anụ ahụ́ na-achị adịghị anabata ihe ndị metụtara mmụọ Chineke, n’ihi na ha bụụrụ ya ihe nzuzu; ọ pụghịkwa ịmara ha,+ n’ihi na a na-enyocha ha n’ụzọ ime mmụọ. 15 Otú ọ dị, onye mmụọ nsọ+ na-achị na-enyocha ihe niile n’ezie, ma ọ dịghị onye na-enyocha+ ya onwe ya. 16 N’ihi na “ònye maara uche Jehova,+ ka o wee kụziere ya ihe?”+ Ma anyị nwere uche+ nke Kraịst.
1 Ndị Kọrịnt 2